‘सुहागरातमा पी’डा’ सहन नसकेर प्राण त्यागेकि रमाको कथा ! – hamrosandesh.com
भोली मेरो बेहुली बन्ने पालो” रमा उत्साहित हुँदै भन्दै थिइ साथीहरुलाई। “आजको भाँडाकुटी भन्दा धेरै रमाईलो हुन्छ भोली बुझिस्..” भोलीका बेहुला साने पनि साथीहरुमाझ रवाफ देखाउँदै थियो। “छोरी तेरालागि कपडा ल्याइदेका छौं आज सहरबाट, हेर त ! कस्तो लाग्यो ? बेहुली हुँदा त राम्री देखिनुपर्यो नि । रातो साडी, रातै ब्लाउज, पहेंलो पटुका,राम्रा बुट्टेदार सितारा भरेको घुम्टो, गाजल, टीका, पोते आदि कहिल्यै नदेखेका श्रृङ्गारका सरसामान देखाउँदै भन्नुभएको थियो आमाले।
जुनुको जस्तै मुन्द्रि नल्याइदेको भनेर झ-गडा गरी एकछिन रमाले।अनि हिँडि साथीहरुकोमा। आहा ! कति माया गर्नुहुन्छ बाआमाले मलाई, खेल्नकैलागि यत्तिको सामान, अरु कस्को बाआमाले ल्याइदिन्छन् ? मनमनै प्रश्न गर्दै थिइ ऊ। दाइ त्यही जग्ज्ञेको बीचमा के के सामान ओसार्दै थिए, काकाहरु अर्हाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अघि अघि आउँदा सधैं रमालाई जिस्काउने पण्डित बा आज चुपचाप रेखी हाल्दै
‘जग्ज्ञे’ आमाले भन्नुभयो । अनौठो मानेझैं हेरीरही रमाले। बुबा बाहिर भित्र गरीरहनुभएको थियो। नजिक आएर केही भन्दै अर्कोतिर लाग्दै गर्दै थिए मान्छेहरु।दाइ त्यही जग्ज्ञेको बीचमा के के सामान ओसार्दै थिए, काकाहरु अर्हाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अघि अघि आउँदा सधैं रमालाई जिस्काउने पण्डित बा आज चुपचाप रेखी हाल्दै थिए जग्ज्ञेको बीचमा। सबै झकीझकाउ अनि भरिभराउ थियो,सबै उत्साहित थिए।
२५ वर्षे जवान बेहुलालाई बीचमा राखेर बाजा बजाउँदै आएका जन्तीको हुल पिपलबोटे डाँडाबाट तल झर्यो।आमा,फुपु र अर्चना दिदीहरुले हतार भयो भन्दै हिजो ल्याइदिएको कपडा लगाइदिन लाग्नुभयो, रमा रमाइलो मानीरहेकी थिइ। “अब लुगा लगाएर म पनि जान्छु जुनुहरुसङ्ग, तिनीहरु भन्दा मलाई र कति राम्री देखिन्छ होला है फुपु ?” चुप लाग ! हतार भैसक्यो भन्दै कानमा गहना लगाइदिन आँट्नुभयो अर्चना दिदीले। भो! कानमा मुन्द्रा बाहेक लगाउन्न भन्दै उम्किन खोजी रमा।
आमाले सम्झाउँदै भन्नुभयो :- छोरी आज खेल्न हुँदैन,कति सोमत नभएकी बद-मास रहिछ भन्छन् मान्छेहरुले। बाजा गाजासहित डोली अघि लगाएर जन्ति फर्किए, जन्ती फर्किएसंगै गाउँलेहरु पनि आ-आफ्नो बाटो लागे, सुनसान भयो बिहेघर। सुनसान जस्तै भयो पूरा गाउँ, किन र आमा?? केही हुँदैन है दिदी? हामी सधैं खेल्छौं। अर्चना दिदीतिर हेर्दै भनी रमाले।
“आज तिम्रो बिहे हो कान्छी,आज दुलाहको घरमा जानुपर्छ तिमी” आमाको बोलीसंगै झ-सङ्ग भइ रमा,एकछिन टोलाई सबैको मुखमा हेरी अनि रुन थाली बेस्सरी .. पुरेत बाले चाँडैगरि सक्याए विवाह। डोली चढ्नेबेलामा आमाले केही पोको जस्तो राखिदिनुभयो छोरीका हातमा।
केही छिनमा चितामाथि राखियो लास। च-रम पी-डामा याचना सहित चिच्याउँदा त हाँसी हाँसी जीवन लु-टेको श्रीमानलाई चुपचाप रहेको निर्जिव मुढोमा आगो लगाउन के भयो र? लगायो सजिलै आगो उसले। रमाको कलीलो शरीर खरानी पार्न धेरैबेर लगाएन आगोले पनि, केहीबेरमै रमा धुवाँ भनेर लागिन् आकाशको यात्रामा,बेहुली हुन पाउनु जीवनकै रमाइलो क्षण मानेकी रमाले आखिर बेहुली भएकै कारण जीवन गु-माउनुपर्यो, जुनु र पुष्पाहरुसंग अन्तिम पटक खेल्न नपाई सकीइन् रमा, आमाको काखमा रहर पुगुन्जेल पनि बस्न पाइनन्, राम्रोसँग संसार देख्न नपाई बन्द भए आँखाहरु, रहर गरेको मुन्द्रा लगाउन नपाई जले कानहरु।